Cheap Flights to Aqaba, (AQJ) Air Tickets
Book Flights to Aqaba, Jordan
Facts About Flying to Aqaba
In the last 7 days, Royal Jordanian, Turkish Airlines were the top airlines travelers picked for flying to Aqaba.
88% of travelers to Aqaba were over 35.
May, January had the highest number of Aqaba flight bookings.
February, April had the lowest number of Aqaba flight bookings.
50% of travelers to Aqaba were female.
67% of travelers to Aqaba spent less than 3 days there.
17% of people booked their flights to Aqaba 4 weeks in advance.
Aqaba Traveler's Reviews
Submit Aqaba ReviewSee All Reviews
Aqaba Flight Routes
Flights from Aqaba to Istanbul - AQJ to IST
Flights from Chicago to Aqaba - CHI to AQJ
Flights from Aqaba to Dubai - AQJ to DXB
Flights from New York City to Aqaba - NYC to AQJ
Flights from Aqaba to Athens - AQJ to ATH
Flights from Athens to Aqaba - ATH to AQJ
Flights from Aqaba to Accra - AQJ to ACC
Flights from Amman to Aqaba - AMM to AQJ
Flights from Aqaba to Amman - AQJ to AMM
Flights from Cologne to Aqaba - CGN to AQJ
Flights from Aqaba to Erbil - AQJ to EBL
Flights from Dallas to Aqaba - DAL to AQJ
Flights from Aqaba to Frankfurt - AQJ to FRA
Flights from Los Angeles to Aqaba - LAX to AQJ
Flights from Aqaba to San Francisco - AQJ to SFO
Flights from Philadelphia to Aqaba - PHL to AQJ